Mamee Monster Bbq Noodle Snack 15G 40 Pcs – SUNNY eSTORE
Mamee Monster Bbq Noodle Snack 15G 40...
Mamee Monster Bbq Noodle Snack 15G 40 Pcs
SUNNY Everyday StoreSKU: 9555022303826
Mamee Monster BBQ အရသာသည် ပြုတ်ရန် မလိုဘဲ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွ စားသုံးလျှင် အလွန် အရသာရှိပါသည်။ အရသာမှုန့်များကို ခေါက်ဆွဲထုတ်ထဲသိုထည့်ကာ မွှေ၍စာသုံးနိုင်ပါသည်။ BBQ အနှစ်အရသာရှိပြီး အကင်အနံလေးမွှေးပါသည်။ ခေါက်ဆွဲထုတ်ကို မဖောက်မှီ ခြေ၍စားလျှင် ပိုမို အရသာရှိပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ - ဂျုံ ၊ စားအုန်းဆီ ၊ ဆား ၊ ခွင့်ပြု အရသာမှုန့်များ ၊ သကြား ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်
Mamee Monster BBQ Noodle Snack are snack noodles that do not require cooking and you can enjoy asacrunchy snack. You can have this convenient snack by sprinkling the seasoning into the bag and shake to enjoy! This hasaBBQ taste that gives off the BBQ feel. It tastes better when you crush the noodles into smaller pieces as well!
Key Ingredients: Wheat flour, vegetable oil, salt, contains permitted flavouring substances, sugar, and spices.
Includes - 40 pieces of Mamee-Monster BBQ Noodle Snack (15g)